Qaphela: Esi sithuba ASIBHALwanga sabanini bezintlu. Kubhalelwe abathengisi abaqeshisa uluhlu lwee-imeyile okanye ababhengeze kwiileta zeendaba ze-imeyile. Ukuba ungumthengisi othe, okanye ocwangcisa, ukufaka i-imeyile yomntu wesithathu kumxube wakho wentengiso kuya kunceda ukusebenzisa ijelo ngempumelelo ngakumbi kwaye ufumane i-ROI engcono, nohlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Ekugqibeleni, iya kunceda uluhlu lwabanini, nabo. Emva kwayo yonke into umthengisi owonwabileyo ungumphindisi wentengiso.
Kuyo yonke iminyaka yam kwintengiso ye-imeyile kokubini iarhente yentengiso ye-imeyile kunye noluhlu lokuqeshisa uluhlu lwe-imeyile, ndiye ndaneencoko ezimbalwa ezinje, kwaye ndicacisa, “Ndiyarhoxisa amaphulo am kuba andifumani ngokwaneleyo [ukucofa, ukukhokela, ukuthengisa, okanye ezinye iziphumo ezibonakalayo]. ”Umthengisi ke utsala iphulo kwaye ushiya ephoxekile ngokusebenza koluhlu lwe-imeyile.
Kodwa bekukho iimeko apho, ngaphambi kokuba umthengisi (okanye iarhente yakhe okanye uluhlu lwabarhwebi) athabathe iphulo, babezimisele ukwenza uhlengahlengiso oluncinci kunye nokuzama kwakhona. Kwaye abo babekhe baziva bedanile emva koko babona ukuphucuka kwangoko ekusebenzeni kwephulo. Ndabelane nabo ngemfihlo enye evavanyiweyo kunye nenyaniso yokupapasha nge-imeyile ngempumelelo, oko kukuthi:
Tshatisa iikhrayitheriya zakho zokuyila kunye nempumelelo kwinjongo yakho yephulo.
Ewe. Oku kuyithengisa i-101, kodwa andinakukuxelela ukuba ndibone kangaphi ukuba iinjongo, ubuchule kunye nemilinganiselo yempumelelo ayilunganga kwaphela. Kwaye xa sele, iphulo alikho kufutshane njengoko liphumelele njengoko linokuba njalo. (QAPHELA: Ngenxa yezizathu ezingaziwayo oku kungalungisi kakuhle kwenzeka rhoqo nge-imeyile.)
Iindaba ezimnandi zezokuba kukulungiswa okulula okunokuguqula ngokukhawuleza i-ROI yentengiso ye-imeyile. Xa ujonga umkhankaso we-imeyile-centric, qala ngokuzibuza le mibuzo mine:
Yintoni injongo yam ngeli phulo?
Ngaba iphepha lam lokuyila kunye nelokuhlala lihambelana naloo njongo?
Ngaba umnikelo wam, iphepha lokuyila kunye nelokufika liyavakala kubaphulaphuli bam hayi kum kuphela?
Ndiza kuyilinganisela njani impumelelo yephulo, kwaye ngaba lihambelana nenjongo?
Uzama ukuphumeza ntoni? Ukuthengisa? Ubhaliso? Umbuzo wentengiso? Ukuthenga kwangoko? Nokuba yeyiphi na injongo yakho, qiniseka ukuba iphepha lakho lokuyila, iphepha lokufika, kunye nemilinganiselo yonke ihambelana nenjongo kwaye iyavakala ngokwembono yabaphulaphuli bakho (ehlala yahlukile kunaleyo).
Ngaba uphawu lwakho lokufaka uphawu? I-imeyile ifezekisa ngokufanelekileyo iinjongo eziphambili zokufaka uphawu: ulwazi, unxibelelwano lomyalezo, ukuthandwa, injongo yokuthenga, njl. Uyilo lwabo luyabandakanyeka, uphawu lwabo lubalasele, kwaye baqinisa imiyalezo abafuna ukuba umbukeli ayidibanise neempawu zabo. Kodwa ukunqunyulwa, xa kukho enye, kuza xa umthengisi elinganisa iphulo ngokunqakraza okanye kwenye i-metric xa ubugcisa bungazange bucetyelwe ukufumana olo hlobo lwempendulo. Ibhrendi ilinganiswa ngempembelelo yokujonga (okt, umbono) intengiso inombono kunye nenjongo yombukeli, hayi ngempendulo kwangoko. Endaweni yoko sebenzisa amaxabiso avulekileyo njenge-barometer yakho.
Ngaba ufuna ukutyelelwa kwiwebhusayithi yakho okanye kubhaliso olutsha? Kakhulu! Qiniseka ukuba uyile uyilo lwakho ukuze ufumane olo hlobo lwempendulo. Ukuba umyalezo wakho wentengiso uthi, "iWidgetTown: Eyona mijelo ilungileyo ijikeleze. Cofa apha ukuze ufumane ezinye. ” unokuba nefuthe kwimbono yoluhlobo lweempawu, kodwa akunakulindeleka ukuba ubacofe. Kutheni kufuneka? Banalo lonke ulwazi abaludingayo, kwaye phantsi kwendlela, ukuba bafuna iwijethi, kunokwenzeka ukuba bakubize. Kodwa abayi kucofa ngoku okanye bona, ngokwamaxesha angenakuthelekiswa nanto, banesidingo kwangoko. Ukuba injongo yakho kukubhalisa, nika umbukeli isizathu sokucofa. Banike into exabiseke ngokwenene (kubo).
Ngaba injongo yakho ikhokelela kwisizukulwane? Iphepha lokukhuthaza kunye nelokufika ngoku liyinxalenye ebalulekileyo yephulo lakho. Ngaba iqhina lokuyila lingena kwiphepha lokufika? Ngaba inkuthazo ikhuthazwa kubuchule obucacileyo kunye nokuqaqambileyo oboniswe kwiphepha lokufika? Ngaba kucacile kwiphepha lokufika (kunye ne-imeyile) yintoni ithemba ekufuneka liyenzile ngokulandelayo, kwaye inkuthazo yomelezwa? Ngaba kukho iziphazamiso (ukuhambahamba, amakhonkco onxibelelwano lwasentlalweni, njl. Nayiphi na kwezi inokunciphisa ukusebenza kwephulo lokuvelisa ukukhokelela kunye nokunciphisa inani lezikhokelo ozivelisayo.
Mhlawumbi injongo yakho kukuthengisa kwi-Intanethi. Ngaba yimveliso umntu anokuyithenga ngokunyanzelwa okanye ngaba imikhankaso yakho kufuneka ijolise kwiminyhadala, enjengeeholide? Ngaba sele uyigqibile yonke inkqubo yokuphuma? Ngaba icocekile kwaye ilula, okanye idityanisiwe kwaye iyimfihlakalo? Ngaba ulandela umkhondo wokushiya inqwelo ukuze ubone ukuba ziphi iindawo ezinengxaki? Ngaba umboneleli wakho we-imeyile (i-ESP) okanye isisombululo sangaphakathi se-imeyile senkxaso yokulahla inqwelo? Ngaba ubeka icookie kwizikhangeli zabatyeleli ke ukuba bayabuya kwiintsuku ezimbalwa kwaye bayithenge loo mveliso, ungayibala intengiso evelise izikhokelo?
Ngendlela, ungazami ukufezekisa iinjongo ezininzi ngephulo elinye. Iya kuba njengekamva? Ayenzi isofa elungileyo okanye ibhedi elungileyo.
Ezi zezimbalwa zezinto ezisisiseko kodwa ezihlala zikho ezinokuchaphazela iintshukumo ezinqwenelekayo kwaye ke uvavanyo lwakho lwe-ROI yephulo lakho lesithathu le-imeyile. Khawukhumbule nje, umgca phakathi kwempumelelo yokuthengisa kunye ne-imeyile kunye nokusilela kwesihlobo. Sebenzisa la manyathelo ukuqinisekisa ukuba imiyalezo kunye neenjongo zakho zikulayini kwaye ungashukuma ngoko nangoko ngemitha ye-ROI.
tags: I-nichole kellyisikhundlaukwakha iqela